Shina famokarana famokarana vovoka sy mpamokatra | ShiningPlast
Koa satria mila miaina ny tranobainay. Mila bebe kokoa hatrany ny fitaovam-panorenana ho an'ny fofonaina mba hisorohana ny fahasimban'ny hamandoana be loatra na ny hamandoana ao anatiny.
Lanja lamba: 80-200gsm
Material: SBPP + Porous Layer
Ambainy: (3.3ft ~ 5 ft) 1-1.5meter
Halavan'ny horonan-taratasy: 50m (16 ') ~ 100m (328') na namboarina
Faharetana amin'ny sintona: 90-350N (fenitra EN)
pirinty: 1-4 loko azo
Ny firenena eropeana maro no nanamboatra ny sela fantson-taonan'ny rivotra. Izay mamela ny hamandoana fanampiny hivoaka, ary koa manakana ny rano tsy hiditra.
ShiningPlast Roofing Roofing fofona azo vokarina amin'ny alàlan'ny fanarahana ity fironana ity mba hahazoana antoka fa mandositra tsara ny zavona avy amin'ny rano. Ny ShiningPlast Breathable Membrane dia tsy hydrophilic ihany koa hisorohana ny hidiran'ny rano.
ShiningPlast Roofing Roofing fofona matevina dia mateza sy matanjaka koa satria ny lamba dia namboarin'ireo sosona composite.
·Mafy sy maharitra
ShiningPlast Roofing Roofing fofona matevina dia mateza sy matanjaka koa satria ny lamba dia namboarin'ireo sosona composite. Fantatsika fa ny hery maharitra sy ny ranomaso dia zava-dehibe amin'ny tafo mandritra ny fametrahana.
Ireo sosona SBPP satria ny rafitra lehibe no mampihena ny lanjany amin'ny ankapobeny. Tena mora entina.
·Miaro ny toetrandro
ShiningPlast membra ravin-tafo marefo dia tsy hidradradradra ary mafy mandritra ny andro ratsy. Amin'ny fikarakarana UV lehibe dia hiaro ny tafo fanamboarana mandritra ny fananganana na avy amin'ny rivotra mahery.
.Nanana fofon'aina (sandan'ny SD ambany)
Amin'ny maha-taona tsy misy fanandramana vita amin'ny fanandramana sy fampivoarana. Tsy mamokatra fofon'aina fotsiny isika fa tena feno fofonaina. Izahay dia manana ny fitsapana WVT ary izay porofon'ny fofonaina dia nahatratra ny sandam-pandeha lehibe (Lavan'ny SD ambany).
Notsaboina ny UV namboarina tao aminay, mahatonga ny ShiningPlast Breathable Roofing miorina mafy eo ambanin'ny tara-masoandro maharitra UV.
Previous: 2-Ply House Wrap
Manaraka: Fonosahana avo be